Teeth Whitening | Fomba tsara indrindra mahafotsy Teeth Guide - Fizarana 2
Posts tagged "nify Whitening"
Ahoana no mahafotsy nify haingana sy ASA!
Misy fomba maro toy izany ny olona iray dia afaka misafidy ho, amin'ny fomba ny fomba mahafotsy nify. Ny fananana madio, fotsy nify no tena olana. Rehefa Ny nifinao dia mitady ny tsara indrindra, tsapanao kokoa momba ny tenanao sy matoky tena kokoa, vonona ny handray an 'izao tontolo izao. Etsy ankilany, amin'ny dingy mavo nify, manomboka ny hatoky tena ary mety tsy te-mitsiky. Rehefa ela, Ny nifinao dia handeha ihany no mahazo ratsy kokoa raha tsy mandray ny tokony ho amin'ny dingana Whitening sy brightening azy ireo.
Mba hahazoana fotsy nify, ny dingana voalohany dia azonao atao ny manandrana ny fomba mahafotsy nify dia ara ambony ny tapaka toothpaste ho Whitening Bible. Zavatra tsy toothpaste nanampy misy sakafo, Whitening vokatra izay miasa mba hanesorana stains eny ny nify, nandao azy ireo mitady mamirapiratra sy fotsy noho ny teo aloha. Ireo toothpastes izay miavaka dia ny mitovy vidiny toy ny tsy tapaka toothpaste, fa afaka manome anao na dia mampivarahontsana vokatra taorian'ny vitsivitsy monja fampiasana.
Ny ravin fotsy vokatra no tena malaza foana. Raha te-hianatra ny fomba mahafotsy nify, miezaka ny fotsy ravin avy ho anao ka jereo ny fiovana afaka manao. Fotsy ny ankamaroan'ny vokatra ravin ahitana folo ho roa-polo ravin, Ary dia nanoro hevitra fa matetika ny mampiasa ny iray isan'andro mandra-nampiasa ny ravin rehetra. Ny farany tamin'izany fotoana, dia tokony ho afaka mahita iray manan-danja eo amin'ny fanatsarana ny toe-piainana sy ny loko ny nify.
Misy ihany koa fomba iray hafa amin'ny ny fomba mahafotsy nify dia ny tamin'ny laser nify Whitening paika, ny tarehy fomba tanterahana amin'ny biraon'ny ny mpitsabo nify, na ao amin'ny tamin'ny laser nify Whitening Center. Izany dia manome fomba niavaka indrindra vokatry ny rehetra ny nify Whitening fomba, saika avy hatrany Whitening ny nify amin'ny lafiny roa na mihoatra. Fantatra koa amin'ny hoe nify bleaching, fomba io dia tena malaza manerana izao tontolo izao, toy ny iray amin'ireo fomba mahomby nify Whitening. Nandritra izany fomba fanao, manokana gel no ampiharina noho ny nify, avy eo ny hazavana tamin'ny laser no ampiasaina ny gel, activating izany ary Whitening ny nify vokatr'izany.
Learning ny fomba mahafotsy nify Tsy voatery ho zava-tsarotra lehibe. Miaraka maro nify Whitening fomba mahomby, dia afaka mahita ny fomba izay miasa ho anao ny hanome anareo ny mamirapiratra, fotsy tsiky efa nanonofy foana ny. Tsy voatery ho lany harena ianao mba hanala henjana stains hiala amin'ny nify, ary be kokoa ny tsikinao. Ny famirapiratry ny nify, vao mainka ianao te-hitsiky, ary rehefa mahatsapa tsara kokoa ny mijery tsara kokoa.
Ny aterineto no loharano tsara indrindra ho anao mba hampiasainao rehefa mitady fomba ny fomba mahafotsy nify. Ho tanteraka tsara hanangona maro tsipiriany momba ny fomba ny fomba mahafotsy nify ary izay azo antoka fa misy dikany satria fantatrareo fa manana mamiratra sy fotsy nify dia tombony ho an'ny rehetra, izao no mahita izany fa manana ny tsara indrindra tsiky dia afaka manana.
Posted by mahafotsy Teeth Guide - Jona 5, 2016 amin'ny 12:04 AM
Sokajy: Home Miorina amin'ny mahafotsy Nify Tags: ny fomba mahafotsy nify, tamin'ny laser nify Whitening, nify Whitening, mahafotsy nify, mahafotsy nify ao an-trano